पालुङटार सिंचाई गर्ने योजना मोडालिटी मै अन्यौल | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २८ श्रावण २०७७, बुधबार ०९:०२
दराैँदी समाचारदाताः गोरखाको पालुङटार नगरपालिका क्षेत्र भित्रको एक हजार नौ सय सय हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याउने योजना कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने अझै यकिन भएको छैन । ५० किलोमिटर बाँध बनाएर चेपेनदीबाट पानी ल्याउने भनिएपनि भौगोलिक रुपमा कठिनाई, धेरै खचिलो र ढिलो काम हुने भएपछि बिकल्प खोज्न सुरु भएको छ ।
५० मिटर लामो बाँधबाट पानी ल्याउँदा धेरै समस्या आउन सक्ने अनुमान प्राविधिकहरुको छ । आयोजना सर्वे गर्दा भन्दा सजिलो बनाउने गरी जलस्रोत तथा सिंचाई बिभागमा छलफल भईरहेको पालुङटार कुन्दुरटार सिंचाई आयोजना कार्यालय गोरखाका प्रमुख दिनेश पौडेलले बताए । बाँध लामो भएपछि लिफ्ट प्रविधिबाट पानी ल्याउने विषयमा समेत चर्चा भएको थियो । बिभागको प्राविधिक टोलीले स्थगत अध्ययन गरेपछि मात्रै मोडालिटीको टुङ्गो लाग्ने उनले बताए ।
दुई वर्षदेखि गोरखा सदरमुकाममा पालुङटार कुन्दुरटार सिंचाई आयोजना पुरा गर्न छुट्टै आयोजना कार्यालय खोलिएको छ । उक्त कार्यालयले गत वर्ष बातावरणिय प्रभाव मूल्याङ्कनमा ९ लाख मात्रै खर्च ग¥यो । ६३ लाख बजेट मध्ये अरु सबै फिर्ता गएको आयोजना प्रमुख दिनेश पौडेलले बताए । ‘काम गर्दा गर्दै सर्वेक्षणको बजेट रोक्का भयो’ उनले भने ‘थप काम गर्न सकिएन ।’
कुन्दुरटार सिंचाईका लागि गत वर्ष तीन करोड १७ लाख आएको थियो । गोरखा नगरपालिकाको १०, ११ र १२ नम्बर वडामा सिंचाई सुविधा पु¥याउने उक्त योजनाको कामले गति लिन सकेन । एक करोड दुई लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको कार्यालय आयोजना प्रमुख पौडेलले बताए । ‘यो आयोजनामा यस वर्ष पनि काम भईरहेको छ’ आयोजना प्रमुख पौडेलले भने । कोरोनाको प्रभावका कारण गत वर्ष सन्तोषजनक प्रगती नभएको उनले बताए । आयोजना कार्यालयले गत वर्ष ३५ प्रतिशत मात्रै बित्तिय प्रगती गर्न सक्यो । कुल बजेटको ३५ प्रतिशत खर्च भयो । भौतीक प्रगती भने ५० भन्दाबढि भएको आयोजना प्रमुख पौडेल बताउँछन् ।
गोरखा नगरपालिका १०, ११ र १२ नम्बर वडामा सिंचाई सुविधा तीन वर्ष भित्र पु¥याउने र पाँच वर्ष भित्र पालुङटारको गाईखुर टार, च्याङ्लिटारमा सिंचाई पु¥याउने गरी योजना संचालनमा आएको हो । गोरखाको कुन्दुरटार सिंचाई आयोजना १७ वर्षअघि सुरु भएको थियो । २०५८÷०५९ सालबाट सुरु भएको आयोजना सम्पन्न गर्न पाँच करोड ४५ लाख लाग्ने अनुमान त्यतीबेला प्राविधिकले गरेका थिए । तर अहिले लागत ह्वातै बढेको छ । राजनीतिक खिचातानी, आयोजना सम्पन्न गर्न सरोकारवालाले ध्यान नदिँदा आयोजना अलपत्र छ । दरौँदी नदिको जरेबर देखि कुन्दुरटार सम्मको करिब १७ किलोमिटर नहर संचालन गर्ने योजना थियो । अहिले सम्म करिब १० किलोमिटर नहर मात्रै निर्माण भएको छ भने दुई सय हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुगेको छ ।
पालुङटार क्षेत्रमा उक्त नहरबाट सबै ठाउँमा सिंचाई पु¥याउन नसकेको खण्डमा पोखरी बनाएर पनि बाँझो जमिन सिंचाई गर्ने आयोजना कार्यालयको तयारी छ । कुन्दुरटार सिंचाई आयोजनाको नहर हुनुपर्ने ठाउँमा छेवेटार, दशकिलो लगायतका ठाउँमा अहिले घर बनेकाले आयोजना कार्यालयलाई काम गर्न समस्या भएको छ ।